नेपाल पत्रकार महासंघकाे ६२ औं स्थापना दिवसको अवसरमा अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टद्वारा शुभकामना व्यक्त » Federation of Nepali Journalists
Home About FNJ Committee Current Committee Old Committee Members Publication Workplan Gallery Contact Home » प्रेस बिज्ञप्ति » नेपाल पत्रकार महासंघकाे ६२ औं स्थापना दिवसको अवसरमा अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टद्वारा शुभकामना व्यक्त
नेपाल पत्रकार महासंघकाे ६२ औं स्थापना दिवसको अवसरमा अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टद्वारा शुभकामना व्यक्त2017-03-28T16:04:16+00:00
http://fnjnepal.org/?p=33672017-03-28T16:04:16+00:00Khagendraप्रेस बिज्ञप्तिनेपाल पत्रकार महासंघकाे ६२ औं स्थापना दिवसको अवसरमा अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टद्वारा शुभकामना व्यक्त
नेपाली पत्रकारहरूको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघ २०७३ चैत १६ गते आफ्नो स्थापनाको ६२ औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछ । यस अवसरमा मुलुकभर र संसारभरि छरिएर रहेका महासंघका सदस्य एवं आम नेपाली सञ्चारकर्मीहरूमा म हार्दिक बधाई तथा...Khagendra
« सरकारले अनलाइन मिडियालाई व्यवस्थित गर्ने नाममा नियन्त्रणमुखी निर्देशिका जारी गरेकोमा महासंघकाे आपत्ति
दोषीमाथि कारबाही गर »